चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का, यस्तो छन् रोचक जानकारी । – Dainik Samchar
चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का, यस्तो छन् रोचक जानकारी ।
August 19, 2021 653
चलचित्र ‘होस्टेल रिटन्स’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी नायिका स्वस्तिमा अहिले २६ बर्षकी भईन । पछिल्लो समय अत्यन्तै रुचाइएकी स्वस्तिमा सन १९९५ जुलाई ४ मा जन्मेकी हुन् । आफ्नो प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरबाट पूरा गरेकी थिइन्।
१७ वर्षको उमेरमा, उनले नेपाली राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस टिन नेपालमा भाग लिएकी थिइन्। त्यो समयमा उनी उत्कृष्ट पाँचसम्म पुगिन् । फोटोसुट गरेर सामाजिक सन्जालमा अपलोड गरेपछि उनलाई म्युजिक भिडियो खेल्न प्रस्ताव आउन थाले । दुई भिडियो गर्नासाथ निर्माता सुनील रावलले होस्टेल रिटर्न्समा अफर गरे । फिल्म राम्रो बन्यो, उनले पनि राम्रै प्रशम्शा बटुलिन । उनलाई संभावना बोकेको नायिकाको रुपमा हेर्न थालियो ।
स्वस्तिमा खड्का डेब्यु फिल्म होस्टेल रिटर्न्सबाट नै सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीका रुपमा चिनन थालिन । उनको सुन्दरता र अभिनय देखेर दर्शक मोहित भए । नयाँ फिल्मबाट भटाभट प्रस्ताव पनि आउन थाले । त्यही बेला स्वस्तिमाले ‘बोल्ड’ निर्णय गरिन्, निर्देशक/अभिनेता निश्चल बस्नेतको संग बिबाह गर्ने । सफलता चुमिरहदा बिहे गर्ने नायिकाहरु कमै भेटिन्छन् ।
प्रायः नायिकाहरु करिअरबाट किनारा लागेपछि बिहे रोज्छन् । सफलता चुमिरहदा बिहे गर्नेहरु पनि धेरैजसो बिहेपछि हराउँछन् । त्यसैले नजिकका शुभचिन्तकले स्वस्तिमालाई बिहे नगर्न सुझाए । ‘करिअर सकिन्छ’ भन्ने भय देखाए । तर स्वस्तिमाले बिहे गरिछाडिन । त्यतिबेला २० वर्ष पुग्दै थिइन्, हतारिनुपर्ने केही थिएन । तर माया बसेपछि कसको के लाग्छ ? स्वस्तिमाले बिहे गरिछाडिन् ।
निर्देशक निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमाको यो जोडीलाई राष्ट्रीय दाइ, भाउजुको नामले चिनिन्छ । दर्जनौ म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी स्वस्तिमा पछिल्लो समय ठूला ब्यानरका फिल्महरुमा अनुबन्धित हुन थालेकि छिन् । तर म्युजिक भिडियोलाई पनि समय दिरहेकी छिन् । ५ वर्षअघि निश्चल बस्नेतसँग लगन गाँठो कसेकी उनी कुटुमा कुटु सुपारी दाना बोलको गीतबाट निकै चर्चामा आएकी थिईन ।
अभिनयमा ब्यस्त यो जोडीको बच्चा भएको छैन । सायद त्यसैले होला अचेल यो जोडीलाई एकसाथ देख्नसाथ त्यहाँ एक प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । बच्चा कहिले हुन्छ ? एक कार्यक्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमाले आफुहरुको सन्तान अझै केही वर्षपछि आउने बताएकी थिईन । उनले भनिन्, ‘ढिलो आउँछ तर कडा आउँछ ।’ स्वस्तिमाको जवाफमा निश्चिल भने हाँसीरहे ।
अभिनेत्री स्वस्तिमा पछिल्लो समय फिल्म करिअर उकालो लागेको छ । उनले एकपछि अर्काे राम्रो फिल्ममा काम गर्ने अवसर पाइरहेकी छन् । केही वर्ष उनको राम्रा र प्रभावशाली फिल्म खेल्ने योजना छ । त्यसैले होला पहिले महिनामै तीन-चार म्युजिक भिडियो खेल्ने स्वस्तिमा अहिले छानेर मात्रै खेल्ने गरेकी छिन् । स्वस्तिमा अभिनीत लगभग आधा दर्जन सिनेमा प्रदर्शन भए । अधिकांशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइन् ।
‘लभ लभ लभ’बाहेक स्वस्तिमा अभिनीत ‘छक्का-पञ्जा २’, ‘नाई नभन्नु ल ५’ र ‘जय भोले’ हिट भए । ब्लकबस्टर ‘छक्का-पञ्जा ३’ मा पनि उनलाई देख्न पाइन्छ । दुई रुपैयाँ फिल्मको ‘कुटुमा कुटु…’ उनले कम्मर मर्काएको पहिलो गीत । यसले युट्युबमा १५० मिलियन भ्युज बटुलेर धेरै हेरिएको नेपाली म्युजिक भेडियोको नयाँ रेकर्ड राखेको छ ।
पछिल्लो समय अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का दक्षिण भारतीय फिल्म ‘थिरिमाली’मा अनुबन्धित भएकी छिन् । फिल्ममा स्वस्तिमाको भूमिकालाई गोप्य राखिएको छ । फिल्मको ७० प्रतिशत छायांकन नेपालको काठमाडौं र मुस्ताङ लगायत विभिन्न स्थानमा फिल्मांकन हुने जनाइएको छ । राजिव सेठ्ठीले निर्देशन गर्ने फिल्ममा बिपिन गर्ज, अन्ना राजन, धर्माजन बोलगटीको मुख्य भूमिका छ ।
बिस्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को संक्रमणबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन गरिएको धेरै दिन भैसकेको छ । जसका कारण नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू पनि घरमै छन् । घरमा रहेको बेला उनीहरूले विभिन्न काम गरिरहेका छन् । कतिपयले यो फुर्सदको समयमा भ्लग पनि बनाईरहेका छन । यो समामा नायिका स्वस्तिमा खड्का पनि घरमै छिन् ।
Prevकैलाली: दिदिको छोराले कोहि नभएको मौका छोपी १३ बर्षिया सपनालाई…. (भिडियो हेर्नुस)
Nextअठार बर्ष पुगेपछि महिलाको विवाह अनिवार्य गर्न सांसदको माग
शिला आले र बद्री पंगेनीको मिडियामा रुवाबासी,बोल्दा बोल्दै शिलाको काखैमा आमाको निधन
काठमाडौ रेड जोनमा ? विज्ञहरु चिन्तित
पैसामा बिकेको अस्पतालले २१ दिने शिशुको ज्यानको प्रवाह समेत नगर्दा यस्तो अवस्था !
स्वस्तिमा खड्का अभिनित साउथ इन्डियन फिल्म ‘थिरिमाली’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडिओ (4522)